बैङ्कहरुको ब्याजदर घट्ने भएपछि नेप्से ९.९५ अङ्कले बढ्यो | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर बैङ्कहरुको ब्याजदर घट्ने भएपछि नेप्से ९.९५ अङ्कले बढ्यो
on: २५ आश्विन २०७५, बिहीबार १६:३० मुख्य खबर, लगानी
बैङ्कहरुको ब्याजदर घट्ने भएपछि नेप्से ९.९५ अङ्कले बढ्यो
असोज २५, काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत बढेर बन्द भएको छ । कारोबार भएको एक घण्टाको अवधिसम्म घटेको परिसूचक सोपछि अन्त्यसम्म ९ दशमलव ९५ अङ्कले बढेर १ हजार २ सय २८ दशमलव २८ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । यस दिन कारोबार भएका १० समूहको परिसूचकमा बैङ्किङ समूहको परिसूचक १ दशमलव १५ प्रतिशतले बढेसँगै आठ समूहको परिसूचक बढेपछि नेप्से परिसूचक बढ्न पुगेको हो ।
अधिकतम ९ देखि १० प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्ने निर्णय
बिहीवार बसेको बैङ्कर्स एशोसिएशनको बैठकले मुद्धति निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ अधिकतम १० र संस्थागतमा अधिकतम ९ प्रतिशत ब्याजदर कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही कारण बिहीवारको नेप्से परिसूचक बढ्न पुगेको हो । केही वाणिज्य बैङकहरुले प्रतिस्पर्धी रुपमा ब्याजदर बढाउन थालेपछि यस्तो निर्णय भएको हो । बैङ्कहरुले हाल व्यक्तिगतलाई ११ र संस्थागत निक्षेपकर्तालाई साढे १० प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिँदै आएका छन् । सो ब्याजदर शुक्रवारदेखि लागू हुने गरी सहमति भएको छ ।
यस दिन कारोबार रकम अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ११ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढेकोे छ । कारोबार रकम रू. २ करोड ५७ लाख बढेको हो । बिहीवारको कारोबार रकम रू. २५ करोड २२ लाख बराबरको भएको छ । त्यस्तै, कुल बजार पूँजीकरण शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत बढेर रू. १४ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स शून्य दशमलव ९१ प्रतिशत बढेर २ सय ६१ दशमलव शून्य ४ विन्दुमा पुगेको छ ।
नेप्सेमा सर्वाधिक कारोबार हुने १० कम्पनीहरु
कारोबार भएका १० समूहको परिसूचकमा बैङ्किङ समूहको १ दशमलव १५ प्रतिशतले बढेको छ । यस समूहमा पर्ने अधिंकाश कम्पनीको शेयर मूल्य बढेपछि यस समूहको परिसूचक बढेको हो । वित्त समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ९५, निर्जीवन बीमाको शून्य दशमलव ८८, विकासको शून्य दशमलव ८१, ‘अन्य’को शून्य दशमलव ७२, लघुवित्तको शून्य शदमलव ६६ जिवन बीमा र जलविद्युतको शून्य दशमलव १४ प्रतिशतले बढेको छ । होटल समूहको परिसूचक १ दशमलव ९३ प्रतिशत र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ५३ प्रतिशतले घटेको छ ।
९९ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो, ३९ कम्पनीको घट्यो
कारोबार भएका कम्पनीमध्ये ९९ कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छभने ३९ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, २७ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । युनाइटेड फाइनान्सको शेयर मूल्य ७ दशमलव ९५ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता रू. १ सय ६३ मा कारोबार भएको छ । सिन्धु बैङ्कको शेयर मूल्य ५ प्रतिशतले बढेको छभने पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य ५ दशमलव ५५ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता रू. १ सय ३६ मा कारोबार भएको छ ।
मङ्गलवार नेप्से परिसूचकले सेतो मैनबत्ती बनाएको छ । यस दिन नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अर्थात् ४७ दशमलव ५४ स्केलमा रहेको छ । यसले बजारमा सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । नेप्सेको एडी रेशियो २ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको छ । यसले बजार वुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।
१० चैत्र २०७५, आईतवार ०९:५०
सातामा १४.९० अंकले घट्यो नेप्से
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार १६:५४
१ महीनामा अनलाईन कारोबार प्रणालीको समस्या समाधान गर्न वाईकोलाई निर्देशन
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार १६:३१
नेप्सेमा १ करोड ३८ लाख बोनस शेयर सूचीकृत, आइतवारदेखि खरीद–विक्री गर्न पाइने (कुन कम्पनीको कति शेयर ?)
८ चैत्र २०७५, शुक्रबार १४:२७